Xaaladaha isticmaalka kaararka loo yaqaan 'Apple Card Jailbreak' waa mamnuuc | Wararka IPhone
Jailbreak waa mamnuuc shuruudaha isticmaalka Apple Card
Toni Cortés | | Apple Pay, Jailbreak, dhowr
Shuruudaha isticmaalka ee ay tahay in la aqbalo si loo isticmaalo Kaarka Apple. Waxay si cad u qeexaan Mamnuuca Jailbreak on our iPhone la xiriira kaarka lacag bixinta sheegay.
Goldman SachsSaaxiibka maaliyadeed ee Tim Cook ee mashruuca Apple Card, ayaa horey u daabacay heshiiska macmiilka sidaa darteed wax shaki ahi kuma jiro. Heshiiskan waxaa lagu qanacsan yahay inuusan noqon doonin kaarka amaahda caadiga ah, maxaa yeelay wuxuu la yimaadaa shuruudo gaar ah oo laga helo Apple.
Sida la filayo, arrin muhiim ah oo culus sida ku bixinta qalabka, Apple wuxuu noqon doonaa mid aad u af badan oo ma ogolaan doono in iPhone lagu fara-geliyo taas oo aan ku bixin karno, soo bandhigida codsiyo aan soo marin maamulka shirkadda. Waa la yaqaan Jailbreak, macruuf aan rasmi ahayn, oo wax laga beddelay, taas oo aan ku rakibi karno codsiyo asal ahaan shaki ku jiro oo hal sabab ama mid kale aysan ugu jirin Apple Store, sidaa darteed iyada oo aan la kantaroolin shirkadda, iyadoo ay jirto halista ay tani ku imaaneyso.
Wax sidan oo kale ah ayaa la filayay, tan iyo taariikh ahaan Apple waligeed aad ugama dabacsanayn isticmaalka JAILBREAK. Codsi kasta oo laga heli karo Apple Store waxaa lagu qorsheeyay xeerar shirkadeed oo aad u adag, kuwaas oo dib u eegis ku sameeya barnaamij kasta iyo cusbooneysiintiisa si taas loo fuliyo. Waa cabashada weligeed ah ee ka soo yeeraya Apple, isugeyntiisa kontorool iyo dabacsanaan la'aan. Sidoo kale waa faa'iidada kuwa raacsan, nabada maskaxda in codsi kasta oo aad rakibto uu yahay mid aamin ah.
Nidaamka diiwaangelinta iyo ansixinta Apple Card ayaa la sameyn doonaa iyada oo loo marayo barnaamijka iOS Wallet, iyadoo heshiiska ah in qalabka la isticmaalay uu ahaado mid "u qalma". Tani waxay u muuqataa inay khuseyso nidaamka diiwaangelinta kaarka, taas oo macnaheedu yahay in macmiilku u baahan doono inuu la sii joogo qalabka 'iOS firmware'. Tani waxay ka dhigan tahay in nidaamka diiwaangelinta uu xaqiijin doono in qalabka kumbuyuutarka ee iPhone uu yahay midka asalka ah. Haddii aysan ahayn, ma rakibayso. Haddii aad la timaado fikradda weyn ee ah inaad marka hore rakibto Kaarka Apple ka dibna aad jebiso, marinkaaga Apple Card waa la diidi karaa wakhti kasta iyo ogeysiis la'aan.
Xaaladaha isticmaalka, waxay sidoo kale u muuqataa mamnuucida macaamiisha Apple Card inay adeegsadaan adeegga si ay ugu iibsadaan horumarka lacagta, taas oo ah, inay iibsadaan tigidhada bakhtiyaanasiibka, sharadyada, jajabyada kaararka, ama xitaa kripto, sida BitCoin ama Ethereum. Tani wax cusub maahan. Waxaa jira dalal badan oo adduunka ah oo noocaan ah kaararka kaararka deynta iibsashada waa ka mamnuuc.
Marka hore Kaarka Apple waxaa la heli doonaa dhammaadka bisha Ogos, sida uu xaqiijiyay Tim Cook.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Jailbreak waa mamnuuc shuruudaha isticmaalka Apple Card
Apple wax kama beddeli doonto qiimaha badeecadeeda sababtoo ah canshuuraha Trump
Muusikada beddelka ah ayaa caan ku ah Apple Music oo leh liistada cusub ee ALT CTRL